Chaayinaan Ameerkaa Akeekkachiiste!
Ameerikaan dhimma keessoo biyyoota biroo keessa gidduu seenaa jirtuufi odeeffannoo sobaa tamsaasa jirtu akka dhaabdu Ministeerri Dhimma Alaa Chaayinaa akeekkachiseera.
Ameerikaan dhimmoota keessoo ishee keessatti xiyyeeffachuun nageenya lammiileeshee mirkaneessuu akka qabdu Dubbii Himaan Ministira Dhimma Alaa Chaayinaa Zha’oo Lijiyaan ibsa kennaniin hubachiisaniiru.
Dubbii himaan Ministira Dhimma Alaa Chaayinaa Zha’oo Lijiyaan kan kan himan Ameerikaatti yaadannoo waggaa 1ffaa nama gurraacha Ameerikaa Joorji Filooyid Poolisootaan ajjeefame irratti gaaffii sab-qunnamtii irraa dhiyeeteef wayita deebii kannaniinttidha.
Dubbii himichi miidhaa sanyii irratti xiyyeeffate Ameerikaa keessatti oduu olaanaa ta’ee itti fufeera jedhan.
Akka Zha’oo Lijiyaan himanitti, bu’uura qorannoo yaada hawaasaa hojjetameen waggoottan darbe keessatti hariiroo Afrikaa fi Ameerikaa fi Poolisoota Ameerikaa gidduu jiru gara rakkoo hamaatti ce’aa jiras jedhaniiru. By:Abbaa Seenaa
Take your hands off from Ethiopia!